Lonavala neKandala Trip | Holiday Packages for 3N / 4D
Rwendo rwokuLonavala - Khandala
| Mutambo Wokushanyira: 245
[rev_slider alias = "Rwendo rweLonavala - Khandala"]
Paunosvika ku Mumbai ndege / railway station, tora uende kuLonavala. Paunosvika, chengetera kune hotera. Lonavala ave akazivikanwa nekuda kwechipo chechisikigo chakafanana: mabani, makomo, mvura yakawanda, mvura yakaoma uye mhepo inofadza inofadza. Iyi nzvimbo yakazara nokunaka kwepanyama. Lonavala ishoko guru rakagadzirwa naMwari. Mangwanani Zuva rinobuda kuno rinoratidzika sokuti kusasa rinomuka mvura yose. Chirping shiri dzinonomutsa zvinyoro uye zvose izvi zvinoita kuti ive yakanaka mangwanani. Shandisa zororo rose pazuva kana iwe ungasarudza kutsvaga misika yemunharaunda kuti unakidzwe zvokudya zvinonaka zveLonavala. Usiku huno huripo kuLonavala.
Nhasi, iwe uchaenderera mberi uchishanyira Bhushi Dam, iyo ndiyo nzvimbo inonyanya kuzivikanwa muguta rose. Iyo inzvimbo yakakwana yevadzvinyiriri. Ikoko kunoshamisa maponji emvura, pedyo nedhamasiko, inzvimbo yakakurumbira. Zvadaro shanyira Ryewood Park, iyo inowanikwawo kumusika weLonavala uye inopa maonero makuru. Mucheka yakanyatsonaka, uye iwe uchawana miti yakasiyana-siyana uye maruva ane mavara. Gare gare shanyira Tungarli Lake, mudziyo wekuvaka muLonavala uye nzvimbo huru yemvura kuguta reLonavala. Zuva rakasara riri pazororo uye gare gare iwe unotora husiku usiku kuLonavala.
Kudya kwekudya pahotera. Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya khanya Khandala (15 kms / 30 maminitsi). Nokufukidza nzvimbo dzinoona nzvimbo dzakadai se: Karla Caves, Visapur Fort, Dam Walwan. Svika paKandala uye unakidzwe nemaonero kubva munzvimbo dzakanaka munzvimbo dzakanaka. Dzokera kuhotera kuti ugare usiku hwose kuLonavala.
Tumira kudya kwemangwanani, tarisa kubva kuhotera. Enda ku Mumbai kuitira kuti udzoke kumba kumba nechitima kana kuti ndege.